JILIB, Somalia - Militeriga Mareykanka ayaa sheegay in labo weerar oo dhanka cirka ah ay ka fuliyeen Koonfurta Somalia, iyadoo duqeyntan nonayso midii 8aad tan iyo markii uu billowday sanadkaan 2019-ka.
War qoraal ah oo kasoo baxay Taliska Mareykanka ee Africa [AFRICOM], ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay duleedka degmada Jilib, ee gobolka Jubbada Dhexe.
AFRICOM ma sheegin tirada Al-Shabaab uga dileen duqeymaha, balse waxay xaqiijisay in uusan jirin wax khasaaro ah oo dadka shacabka kasoo gaarey howlgalkan.
Sabtidii lasoo dhaafay, Mareykanka ayaa sheegay in 52 xubnood oo kamid ahaa Al Shabaab lagu dilay duqeyn lala eegtay gaari ay la socdeen oo mareyay meel ku dhaw degmada Jilib.
Duqeynta ayaa dhacday wax yar kadib markii Al-Shabaab weerar ku qaadey saldhig ay ciidamada dowladda Somalia iyo kuwa Mareykanka ku leeyihiin degaanka Sanguuni, oo qiyaastii 50-KM dhanka waqooyi uga beegan Kismaayo.
Madaxweyne Trump ayaa bixiyay amar lagu kordhinayo weerarada ka dhanka ah kooxaha argagaxisada ee ku sugan Somalia bishii Maarso ee sanadkii 2017-ka.
In ka badan 500 oo Askari oo American ah ayaa la rumeysan yahay inay ku sugan yihiin Somalia, kuwaasoo saldhigyo ku leh gobollada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose, gaar ahaan duleedka Kismaayo iyo Balli-Doogle.
Wararka ayaa sheegaya in dhamaan shaqaalahii ku sugnaa xarunta ay dhamaan...
Soomaliya 17.08.2017. 11:45
Ciidamada Puntland oo iska caabiyey weerar ay soo qaadey Somaliland 21.05.2019. 22:41
Xukuumada Deni oo xalineysa tabashooyinka amniga ee Mudug 21.05.2019. 22:33
Mid kamid ah Masaska ugu halista badan Afrika oo dilay garsoore 21.05.2019. 20:29
Xildhibaano la xiray oo xaadiray furitaanka baarlamaanka Spain 21.05.2019. 18:48
Kenya oo sababeysay mas'uuliyiinta Soomaaliya ee ku xayirtay Nairobi 21.05.2019. 18:17
Ciidamada sugaya amniga doorashadda J/land oo la shaaciyey 21.05.2019. 15:40